Mampametra-panontaniana Ilay Fifanarahana Ara-Bola 20 Lavitrisa Dolara Amerikana Nifanaovan’i Shina Sy Ginea · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2017 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, English, čeština , Magyar, Español, Italiano, Português, Français
Dikasarin'ny fihaonan'ny filoha Xi Jinping sy ny solontena gineana avy amin'ny CGTN Africa
Teny an-joron'ny fihaonana faha-9-n'ireo mpitarika ao amin'ny BRICS na vondron'ireo toekarena dimy vao misandratra (Brezila, Rosia, India, Shina, Afrika Atsimo) izay natao tamin'ny 3 ka hatramin'ny 5 Septambra tany Xiamen, Shina dia nambaran'ny Minisi-panjakana Gineana misahana ny Fiarahamiasan'ny fanjakana sy ny tsy miankina, Atoa Ibrahima Kassory Fofana ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana famatsiambola. Hamatsiana tetikasa fanorenana fotodrafitrasa maika mandritra ny 20 taona, 2017 ka hatramin'ny 2036 ity fifanarahana 20 lavitrisa dolara ity. Ity famatsiambola ity dia fifanarahana natao hamerenana ny volan’ ilay fampiasambola nataon'i Shina tamin'ny fanomezana alàlana ilay tetikasa fitrandrahana harena an-kibon'ny tany nataonà orinasa shinoa tany Ginea.
Nanao fanambaràna an-gazety ny biraon'ny lapan'ny filoha gineana mba hanazavàna izay voalazan'ilay fifanarahana, saingy araka ny voalazan'i Diallo Boubacar avy amin'ny tranonkala Africaguinee.com, dia efa nanontany tena sahady ny gineana na dia tsy mbola fantatra aza ny antsipirihany. Tahaka izao ny filazany mitanisa ireo lohandohan'ny mpisorona ao amin'ny mpanohitra toa an-dry M. François Bourouno avy amin'ny PEDN (Antoko Fanantenana ho an'ny Fampandrosoana nasionaly) an'ny Piraiministra teo aloha Lansana Kouyaté :
Mampametra-panontaniana ilay fifanarahana ara-bola (20 lavitrisa dolara amerikana) nosoniavin'i Ginea sy Shina tamin'ny talata lasa teo ! Na famatsiambola hananganana fotodrafitrasa ho takalon'ireo harena ankibon'ny tany maharitra 20 taona aza no vinavina, dia nifanontany ireo avy amin'ny mpanohitra.
“Fantatra fa fifanarahana ifangaroan'ny fampindramam-bola sy fanomezana ilay izy. Fa ny tsy fantatra dia ny mikasika ny fampindramam-bola, inona ireo fepetra, ny taha sy ny fomba famerenanana azy ary ireo singa rehetra takalony. Tsy fantatra ihany koa ny famaritana ilay fanomezana. Betsaka ny fanontaniana tahaka izany”
Tamin'ny 2016, 98,97% no anjara noraisin'ny sehatry ny harena ankibon'ny tany amin'ny fanondranana entana tany Ginea (84.12% izany tamin'ny 2015). Afaka mitarika fiara miisa 120 ny fiarandalamby mpitatitra harena ankibon'ny tany, tabataba tsy misy tahaka izany ankoatry ny vovoka no entiny amin'ny làlana lalovany avy any amin'ny toerana fitrandrahana mankany amin'ny seranantsambo. Na izany aza dia antenain'ny gineana fa hanatsara ny fari-piainany io sehatra io, efa natao tsinontsiniavina tanteraka ny sehatry ny fambolena. Nefa manana fahafahana lehibe ny firenena noho ireo karazana toetrandro sy ny isan'ny renirano anànany. Ankoatry ny tantara ratsy ara-jeolojia, dia nomena anarana hoe “Tranoben'i Afrika Andrefana” sy ” Reniranon'ny atsimo” i Ginea.
Mialoha ny hamaranana dia misalasala ny amin'ilay fifanarahana ilay mpisera amin'ny aterineto Rtoa Jeanne Fofana avy amin'ny tranonkala Kababachir.com, satria avy amin'ny faneken'ny minisitra izay nanao sonia ilay fifanarahana, dia tafiditra anaty trosa amboniny ny firenena, trosa izay maneho ny 50%-n'ny trosam-panjakana izay efa maneho ny 48%-n'ny harinkarena faobe anatiny (PIB) :
Maniry fanatsaràna ny faripiainany ny Gineana. Ny fanolorana dolara an-davitrisa sy ny fidedahana ny fahamendrehan'i Alpha Condé dia manakaiky tsotra izao ny kobaka am-bava : ” Resahana ireo totalim-bola ireo, dia miroaroa saina ny gineana ary marina ny azy! Satria tsy misy dikany amin'ny fanatsaràna ny fiainany andavanandro izany. Ny fomba tokana hamadihana izany ho fanatsaràna ny fiainany dia ny fanànany asa.” Mahatsiaro ho voafitaka ny gineana.
Maneho ny tahony ao amin'ny vaovao ao amin'ny Radio France Internationale RFI i Amadou Bah avy amin'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Hetsika Fitrandrahana any Ginea :
Fa tsy voasoritra mazava ny habetsaky ny vola voatokana …
Tsy hanakivy ireo mpampiasa vola hafa avy amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena izay te-hanana faritra trandrahana any Ginea ve izany ? Moa ve tsy kitranoantrano izany ? Mahatoraka ny vidin'ny akora haondrana ve ny vidin'ny fotodrafitrasa ? Hatreto aloha isika dia manana afa-tsy izay voalazan'ny governemanta izay nanao ity fifampiraharahana ity, nefa tsy manome antsipirihany loatra.
Nampiasa ny Facebook ihany koa ireo gineana mpisera amin'ny aterineto mba hanehoany ny ahiahiny. Tamin'ny 1937 ny fitrandrahana voalohany ny baoksita teto Ginea, nefa dia mbola isan'ireo mahantra indrindra aty Afrika Andrefana ihany ny Ginea. Niditra an-tsehatra tamin'ilay adihevitra momba ity famatsiambola goavana ity teo amin'ny rindrin'i M. Sidikiba Keita i Siradiou Paraya Bah ka manontany tena momba izay lesona notsoahina tamin'io lasa io:
Azo fantarina ve ny votoatiny marina amin'ireo fifanarahana famatsiambola Shina-Ginea ?
Inona no vokatra azo tamin'ny fitrandrahana baoksita am-polo taona maro teto Ginea ?
Inona avy ireo lesona azo tsoahina amin'izany?
Fa ilaina ahodina ireo mineraly ireo vao aondrana, izany no zava-manahirana an'i Demba Thez Mara :
Iriako ny hametrahana ozinina fanodinana vokatra mineraly sy fandrendrehana vy mba hanodinana eto an-toerana ireo akora fototra ananantsika. Raha resaka fanatavezana ny Al2O3 (Alumine), dia i Shina no manana ny teknolojia fanatavezana tsara indrindra amin'ny fomba fanasarahana ny raha mivaingana sy ny tsiranoka noho izany mba ho fampiroboroboana ny resaka harena an-kibon'ny tany dia tsy maintsy mila manodina eto an-toerana ary tsy maintsy mila mamokatra angovo ampy isika.
Mamaly an'i Ibrahim Ghuissen, iray amin'ireo mpandray anajara, ary amin'ny fandraisana anaty kajy ny zava-miseho any Ginea amin'izao fotoana izao, dia ny fifandonan'ny mpitandro filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny foiben'ny faritra fitrandrahana baoksita noho ny fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana sy ny tsy fahampian'ny vokatra ara-teokarena entin, indrindra amin'ny resaka asa, dia mampitandriana ireo gineana i Sidikiba Keita :
1. Aza ampiesonin'ny nofinofy isika. Ampahany kely indrindra amin'izay miandry antsika ireo hetsika ataon'ny SMB amin'izao fotoana izao satria hiova ho 300.000T/j ny 30.000T/j , izany hoe avo folo heny. Mazava tsara ny fandaharam-potoanan'ny shinoa : fampihenana tanteraka ny masonkarena rehetra amin'ny lafiny famokarana, manomboka amin'ny fitrandrahana ka hatramin'ny fanaovana FOB. Ny tatitra farany nataon'ny ITIE dia mamerina fa 4 dolara isaky ny baoksita 1 taonina ny salan'ny vola azon'ny fanjakana Gineana raha toa ka avo roa henin'izany no lanin'ny CBG amin'ny fepetra raisina ho fiarovana ny tontolo iainana. Miteraka loto tsy voafehy tsara sahady ny dingana fanadiovana sy fanapoahana amin'ny dinamita. Fanampin'izany ny fitaterana izay atao amin'ny fiarabe tahaka izay ataony amin'izao fotoana izao.
2. Na inona na inona zavatra mafy iaretan'ireo vahoaka manamorona ny SMB dia tsy ampy fitaovana hanarahana ity hetsika ity isika raha tsy hoe mihevitra fifindràn-toerana faobe ho an'ny vahoaka angaha.
Raha ny fiantraika ratsin'ilay fitrandrahana amin'ny tontolo iainana dia misintona lakolosy fanairana i Tidiane Sylla momba ireo vokatry ny fanondranana be loatra izay mety hanondraka ny tsena ka hiteraka fidinan'ny vidiny :
Mety hiteraka ny fihenàn'ny vidin'ny baoksita eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fanondranana be loatra izany. Ao amin'ny faritr'i Boke, Boffa, Telimele, orinasa maherin'ny 10 no mirotsaka amin'ny famokarana baoksita. ‘Ndao hanao zavatra hafa sy hamorona mba tsy hameno ny tsena.
Karazana fifanarahana nampangirifiry tahaka itony nosoniavin'Atoa Mamoudou Thiam tamin'ny 2009/2010, fony izy nitantana ny ministera gineana misahana ny ankoranafo no anton'ilay fiahiahiana betsaka. Any am-ponja any Etazonia izy nanomboka tamin'ny desambra 2016, voaheloky ny fitsarana amerikana ho namotsy volanà kolikoly nitentina 8,5 tapitrisa dolara.
Ny Ivontoerana fandalinana stratejika aty Afrika, sampam-pampianarana akademika noforonin'ny Departemanta Amerikana misahana ny fiarovana ary vatsian'ny kongresy mba hanadihady ny olan'ny filaminana aty Afrika dia namoaka fandalinana iray tamin'ny May 2015 mitondra ny lohateny hoe : Fandrasàna ozon'ny harena voajanahary : Ny fampiasam-bolan'ireo ngezalahy any amin'Ireo indostria mpitrandraka aty Afrika, manadihady ny olana ateraky ny harena an-kibon'ny tany any amin'ireo firenena sasany aty Afrika. Manazava nataon'Atoa Thiam mba hanangonany harena amin'ny fomba tsy ara-dalàna io tatitra io. Ao amin'ny toko natokana ho an'i Ginea ny fanazavàna momba izany : Mitrandraka firenena iray amoron-tevana : ny ohatr'i Ginea.